Wednesday, 15 January 2014 02:17
မင်္ဂလာ ဆွမ်းကျွေးနဲ့ ဧည့်ခံပွဲ စုစုပေါင်းလေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ချစ်သုဝေ
ဂီတဖက်မှာရော ၊ သရုပ်ဆောင်နယ်ပယ်မှာပါ ပရိသတ် အားပေးလက်ခံသလို ပညာရေး နယ်ပယ်မှာလဲ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် လူသိများကျော်ကြားတဲ့အပြင် အောင်မြင်မှုတွေ ဆင့်ကာဆင့်ကာ ပိုင်ဆိုင်နေသူကတော့ ချစ်သုဝေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Wednesday, 15 January 2014 02:01
အောင်မြင်မှုမှာ လျှို့ဝှက်ချက် ဆိုတာ မရှိပါဘူး အိန္ဒြာကျော်ဇင်
လူသန်းပေါင်း ခြောက်ဆယ်ထဲမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက တကယ်ကို မလွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စ ရပ်ပါ။ အောင်မြင်ကျော်ကြား သူတွေမှာ ဘယ်လိုကိုယ်ရည် ကိုသွေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားလဲ၊ သူ့တို့က ဘယ်လို အကြောင်း အရာတွေပေါ်မှာ အသေးစိတ် အာရုံစိုက် ပြင်ဆင်ထားလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စား စရာပါပဲ။
Monday, 13 January 2014 02:26
အိမ်ထောင်ရေးတွင် အချစ်တစ်ခုတည်းဖြင့် မလုံလောက်ဟု ဂျက်ဆီကာဆင်ဆမ် မှတ်ချက်ပြု
"ကျွန်မအနေနဲ့ ဘဝတစ်ခုကို လူနှစ်ယောက် တည်ဆောက်တဲ့အခါ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ကြောင်း သင်ခန်းစာကောင်းတွေ ရခဲ့ပါပြီ။ ဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လူတစ်ယောက်ကို ရှင့်အနေနဲ့ ရူးရူးမိုက်မိုက် ချစ်မိသွားလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှ လုံလောက်မှာ မဟုတ်ဘူး"
ခိုင်မာသည့် အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခု တည်ဆောက်ရန်အတွက် အချစ်တစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက်ကြောင်း ဂျက်ဆီကာ ဆင်ဆမ်က အလေးအနက် မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားလိုက်သည်။ မင်းသမီး တစ်ဦးအဖြစ်မှ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ တစ်ဦးသဖွယ် ပြောင်းလဲရပ်တည်လာသည့် ဂျက်ဆီကာသည် (၂၀၀၆)ခုနှစ်က သူမ၏ ပထမခင်ပွန်း နစ်ခ်လန်ချီနှင့် လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် ယခင်က အဆိုတော် ဂျွန်မေယာ၊ NFL ဘောလုံးသမား တိုနီရိုမိုတို့နှင့်လည်း တွဲခဲ့ဖူးသေးသည်။ သို့သော်လည်း မမြဲခဲ့ချေ။ ယခုအခါတွင်မူ ဂျက်ဆီကာသည် အဲရစ်ဂျွန်ဆင်နှင့် စေ့စပ်ထားပြီး အဲရစ်နှင့် သူမတို့သည် အမှန်တကယ် လိုက်ဖက်သော အတွဲအစပ်မျိုးဟု ခံစားမိကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။
ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာ မှန်သမျှ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လေ့လာတယ်ဇွန်သံစဉ် သူကလည်း The Face of Myanmar ပြိုင်ပွဲမှာ Title ဆုရခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း သဒ္ဒါမာရီယာနဲ့ အတူ ကို ရီးယားနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူက အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး ရုပ် ရှင်နဲ့ပြ ဇာတ်မေဂျာကျောင်းသူ တစ် ဦးလည်းဖြစ် ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ပိုင်းအတွက် သင်ကြားပေး တာဆို တော့ သူ့ရဲ့မော်ဒယ်လ် လုပ်ငန်းအ တွက် အများကြီး အထောက်အကူ ပြုတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Q. ဘာကြောင့် အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာတက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်ဖြစ် တာလဲ။
A. ညီမ သရုပ်ဆောင် အလုပ် ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ သရုပ်ဆောင် လောကထဲကို ဝင်ဖို့ ဒီကျောင်းတက် တဲ့အတွက်လမ်းစရမယ် ထင်လို့ ရွေး ချယ်လိုက် တာပါ။
Q. Face of Myanmar ပြိုင် ဖြစ်တဲ့စိတ်ကူး...
နည်းပညာအားကောင်းလာမှုနှင့် ဆန်းသစ်ဖန်တီးနိုင်ခွင့် အနုပညာရှင်တို့ အမြင်